Martial Arts Institute | Thaing Wizard
သိုငျးပညာကို ဝါသနာပါပွီး သိုငျးသငျတနျးကြောငျး ဘယျနရောမှာရှိမှနျး မသိသူတှအေတှကျ အဆငျပွအေောငျ သိုငျးသငျတနျးကြောငျးလိပျစာတှကေို ဖျောပွပေးထားပါတယျ။ အစပိုငျးမှာ မွနျမာ့သိုငျးသငျတနျးကြောငျးတှပေဲ ဖျောပွမယျလို့ ရညျစူးခဲ့ပမေယျ့ အကွောငျးကွောငျးကွောငျ့ အခွားသိုငျးပညာရပျဆိုငျရာ သငျတနျးတှကေိုပါ ထပျမံဖွညျ့စှကျပေးထားပါတယျ။
အဆငျပွမေယျလို့ မြှျောလငျ့ပါတယျဗြာ… လိုအပျတာရှိရငျလညျး comment ပေးခဲ့ကွပါ။
(၁) မွနျမာနိုငျငံသိုငျးအဖှဲ့ခြုပျ – ၀၁-၅၈၀၇၁၂၊ ၀၁-၅၈၄၃၅၃
(၂) မွနျမာနိငျငံကရာတေးအဖှဲ့ခြုပျ – ၀၁-၃၇၉၉၃၉
(၃) မွနျမာနိငျငံဂြူဒိုအဖှဲ့ခြုပျ – ၀၁-၃၈၀၇၇၂၊ ၀၁-၃၇၄၉၄၁
(၄) မွနျမာနိငျငံဝူရှူးအဖှဲ့ခြုပျ – ၇၃၀၄၄၂၄၃
(၅) မွနျမာနိငျငံ Boxing အဖှဲ့ခြုပျ – ၈၅၅၀၀၈၀
Myanmar Thaing Federation – မွနျမာနိုငျငံသိုငျးအဖှဲ့ခြုပျ
Maung Makan Kantharyar Road
North Dagon, Yangon, Myanmar
Phone: 95+01-580712, 584353
Myanmar Thaing Byaung Byan Association – မွနျမာနိုငျငံသိုငျးပွောငျးပွနျအဖှဲ့ခြုပျ
Sayagyi U Aung Thein
No. (128), Kyaik Khauk Pagoda Road
Thanlyin Township, Yangon;
မွနျမာနိုငျငံသိုငျးအဖှဲ့ခြုပျ ဆရာဦးစိုးဝငျး ဦးစီးသော
ကမ်ဘောဇနနျးတှငျးခူးကာခနျြ့ သိုငျးပွောငျးပွနျ (ပငျမ)
အမှတျ (၇၃၆) ရနျမွေ (၁) လမျး၊ ၂-တောငျရပျကှကျ ၊ သာကတေမွို့နယျ ၊ ရနျကုနျ။
Thaing Byaung Byan (သိုငျးပွောငျးပွနျ)
Saya Byaung Byan Lu Min
No.(16), U San Phe’ Street, (Near Pha Yar Lan Bus Stop)
အခွားသိုငျးပွောငျးပွနျ သငျတနျးခှဲမြား (ရနျကုနျ)
1. အမှတျ (၄၇၀) မဟျောသဓာလမျး ၁၆ ရပျကှကျ၊ ရှပေေါက်ကံ၊ (အင်ျဂါ၊ ဗုဒ်ဓဟူး နံနကျ 8:30-10:00AM)
2. အမှတျ (၂၁၅) ဇီဝစိုးလမျး ၁၄ ရပျကှကျ၊ တောငျဥက်ကလာ (စနေ၊ တနင်ျဂနှေ 8:30-10:00AM)
3. အမှတျ (၁၄၄) ၁၃လမျး၊ ၁ရပျကှကျ၊ မရမျးကုနျး (စနေ၊ တနင်ျဂနှေ၊ 2:00-3:30PM/4:5:30)
LungeThaing (Burma Martial Art) – မွနျမာ့သိုငျးလူငယျအဖှဲ့
Sayagyi U Aung Kyaw Sann
Phone: 09 425 016 872 (Ko Shein Min Kyaw), 09 450 024 553 (Ko Aung Naing Tun)
Sayagyi U Thein Aye
အမက-၂၅ ကြောငျးဝငျးအနီး၊ ဘုရငျ့နောငျမီးသတျဘေးလမျး၊ မရမျးကုနျ၊ ရနျကုနျ။
No. (307), 11th Street
Thamaing Ward (1)
Mayangone Township, Yangon;
(Near Bayintnaung Juction, Myint Mo Hein Tuition Classes)
Phone: 01-653307, 0973149967
Myanmar Zar Ti Thway Thaing Pin Ma – မွနျမာ့ဇာတိသှေးသိုငျးပငျမ
Saya U Zaw Min Tun
H(12/2), U Loon Maung Street,7Miles,
Dragon King – နဂါးရာဇာ
Saya Yan Naing
No. (397), (6th Floor)
Maha Bandoola Road
Between 38th Steet And Seikkantha Street
Kyauktada Township, Yangon;
Myanmar Traditional Bando
Saya Myo Min Swe
No.14, Ahathawka Road, Tamwe, Yangon
Phone: 09-255 908 308
Facebook: www.facebook.com/pages/Myanmar-Traditional-BANDO/431698156923274 and www.facebook.com/bando.min
Thaing Byaung Byan – သိုငျးပွောငျးပွနျ (မန်တလေး)
Sayagyi U Maung Maung
Corner of 16 st and 87 st
Phone: 09420779417, 0933033843
Thaing Byaung Byan – သိုငျးပွောငျးပွနျ (ပုသိမျ)
Sayagyi U Hla Thein
Pathein (Near Yar Ma Nya Market)
Phone: 0931173901 (Ko Khin Maung Bo – Grandson of U Hla Thein)
Doe Nyi Naung Myanmar Thaing Pin Ma Club – ဒို့ညီနောငျမွနျမာ့သိုငျးပငျမကလပျ (မန်တလေး)
Sayagyi Ba Mya Thein
Between 28 Street and 55 Street (in front of Kyan Mar Yae DhamMarYone),
Kyan Mar Yae Quarter, Mandalay.
Black Buffalo Thaing Pin Ma – ကြှဲနကျသိုငျးပငျမ (မန်တလေး)
Thut Ti Myanmar Lethwei Club – သတ္တိလက်ဝှေ့ကလပ် (ရန်ကုန်)
Saya Win Zin Oo and Lone Chaw (3 times Myanmar National Champion)
No.893, Wontharekkita Street,
Mayangone Township, Yangon, Myanmar
Hours: Mon – Sun: 6:00 am – 8:00 pm
Phone: 09 731 87441, 09 731 98929
Facebook: www.facebook.com/pages/Thut-Ti-Myanmar-Let-Whay-Club-Official/630087373698557 and www.facebook.com/pages/Thut-Ti-Lethwei-Burmese-Boxing-Gym/310058745775704
Myanmar Wushu Federation
Padonma Theater, Myaynigone,
Sanchaung Township, Yangon
Mahar Kyunan (Northern China) – Chinese Self-Defence Club – မဟာကွူနနျး
Between Theinbyu and Maha Bandoola Road
Phone: 01-294128, 294109
– Mon, Wed and Fri (7:00 AM – 9:00 AM)
– Tue, Thu and Sat (5:00 PM – 7:00PM)
Myanmar Aikikai(New Organization)
U Mya Sein (5th DAN) – Chief Instructor
37, Warkhalma St. Sangaung, Yangon, Myanmar
Phone : 09 73240148, 095184918
Email : info@myanmaraikikai.com,myanmaraikikai.mm@myanmaraikikai.com, myanmaraikikai.n@gmail.com
Website : www.myanmaraikikai.com
Millennia Aikido Dojo
No.(267), 5th Floor, Pyay Street,
Myaynigone, In Front Of Dagon Centre II,
Phone: 095088410, 095000481
International Karate Organization Kyokushinkaikan (Myanmar)
Office Tel: 95-1-500405,500406
Fax : 95-1-539557
Email : ikomyanmar@gmail.com
Website : www.ikomyanmar.com
Matsushima Kyokushin Karate
IKO Myanmar Branch Chief Sayagyi U Maung Maung Myint
No.(601), Pyay Street, Yudatan Yeik Thar,
(Beside Kanbawza Bank, Near Malar Bus Stop)
UNITED SECURITY – Security and Martial Arts Institute
Center (1) : Y.W.C.A, Bogalayzay Street, Botahtaung Township.
Center (2) : Mary Chapman School,Thantaman Street, Dagon Township.
44 thoughts on “Martial Arts Institute”
soesoe on June 30, 2013 at 12:11 pm said:
ကျွန်တော် ရှာနေတာနဲ့အတောပဲဗျား ကျေးဇူးတင်တယ်…
ဗန်တို၊ ဗန်ရှည် ကို စနေ၊ တနင်္ဂနွေ နှစ်ရက်ပဲအချိန်ရလို့..ဘယ်မှာသင်ရမလဲမသိပါဘူး..စုံစမ်းကြည့်တော့လည်း..အချိန်မကိုက်ပါ။ ကျေးဇူးပြုပြီး..လမ်းညွှန်ပေးပါ။
Aung Thu Htet on July 4, 2013 at 8:00 pm said:
မြောက်ဒဂုံကသိုင်းသင်တန်းက နေ့တိုင်းဖွင့်တယ်လေ။ ဒါမှဟုတ်လဲ ပုဇွန်တောင်မှာ ဆရာဦးပြည်သိမ်းတို့ ဆရာဦးချစ်သန်းတို့ရဲ့ တပည့် ဆရာဦးအောင်ကျော်ဆန်း ဆိုတာရှိပါတယ်။ တနင်္ဂနွေတစ်ရက်ပဲ သင်ပေးပါတယ်။ ၀င်ကြေး 2000 ပဲပေးရပြီး သင်တန်းကြေးလဲ ပေးစရာမလိုဘူးလို့ကြားပါတယ်။ 0943095283 ကို ဆက်သွယ်ကြည့်ပါ။
pyae phyo aung on October 6, 2015 at 8:07 pm said:
သိုင်းစည်းကမ်းများဆိုတာရှိပါတယ်. ဗန်တိုဗန်ရှည်အတွက်ထင်ပါတယ်. ဥပမာ.မိမိကိုမျက်ရည်ကြီးငယ်သုံးကြိမ်သုံးခါကြအောင်မလုပ်ဘဲမိမိ၏လက်သီးကိုမသုံးပါ။ အဲဒါမျိုးရှာတွေ.ရင်တင်ပေးစေချင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ.
Myo Min on July 16, 2013 at 4:47 pm said:
soe soe ရေ ဗန်ဒိုပညာသင်ဖို.ရှာနေတယ်ဆို။အခုသင်နေပြီလား၊အစဉ်ပြေလား၊မသင်ရသေးရင်လိပ်စာပေးလိုက်မယ်နော်၊အဲဒီသင်တန်းမှာ တကယ့်မြန်မာ့ဗန်ဒို အစစ်အမှန်ကိုသင်ပေးနေတယ်။ဖုန်းနံပါတ်ကတော့ 0973004300 ပါ။
Aung Thu Htet on July 16, 2013 at 7:19 pm said:
သင်တန်းနာမည်နဲ့ လိပ်စာလဲ ပေးဦးလေဗျ။ ဒါမှမဟုတ် သင်တန်းမဖွင့်ဘဲ စိတ်ဝင်စားတဲ့ တပည့်တွေကိုပဲ သင်ပေးနေတဲ့ဆရာဆိုလည်း နာမည်လေးတော့ ပြောခဲ့ပါဦး။ နို့မို့ဆို ဖုန်းခေါ်ပြီး ဘယ်လိုမေးရမှန်းမသိဖြစ်နေဦးမယ်။
Angle on July 18, 2013 at 4:44 pm said:
ဟုတ်ပါရဲ့အကို လောလော လောလောနဲ. ရေးလိုက်တာ နာမည်ထဲ့ရေးဖို.မေ့နေတယ်။ကိုမျိုးမင်းလို.ခေါ်တယ် အကိုရေ 0973004300
soe thu han on July 25, 2013 at 11:21 pm said:
Mandalay မှာဆိုဘယ်​မှာ စုံစမ်းရမလဲဗျ
Aung Thu Htet on August 2, 2013 at 8:23 pm said:
မန္တလေးမှာဆိုရင် မန္တလေး မြောက်ပြင် 16လမ်း 87လမ်း မှာ ဆရာဦးမောင်မောင်တို့ရဲ့ သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်းရှိပါတယ်။
arkar on August 2, 2013 at 2:16 pm said:
arkar on August 2, 2013 at 2:22 pm said:
ကျွှန်တော်ငယ်ငယ်ကတိုင်ဝါသနာပါခဲ့တာ အိမ်ကမလုပ်ခိုင်းလို့နယ်မှာလည်းမရှိဘူးဗျ အခုရန်ကုန်ရောက်တုံးလေးမို့ပါနော်
Aung Thu Htet on August 2, 2013 at 8:19 pm said:
ဟုတ်… ကိုအာကာရေ… အပေါ်မှာ လိပ်စာတွေရော ဖုန်းနံပါတ်တွေရော ဖော်ပြပေးထားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကိုတော့ ဖုန်းဆက်ပြီး စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
arkar on August 4, 2013 at 12:51 am said:
တောင်ဥကလာနားမှာရှိလားမသိဘူးခင် ဗျ လှည်းတန်းလောက်လည်းရပါတယ်အကိုရေကူညီပါအုံးနော် ဝေးလွန်းလို့ပါနော် ကျေးဇူး
Aung Thu Htet on August 15, 2013 at 11:44 am said:
ဒီမှာ သေချာပြန်ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ https://thaingwizard.wordpress.com/martial-arts-institute/ နီးတဲ့နေရာမှာ တတ်လို့ရပါတယ်။
lukalay on August 17, 2013 at 10:10 pm said:
နေလင်း on September 6, 2013 at 1:23 pm said:
ကိုအောင်သူထက်ရေ ပြင်ဦးလွင်မှာကော သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်းရှိလားဗျ။ ရှိရင်သင်တန်းလိပ်စာလေး
ပေးပါလား။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ ပြင်ဦးလွင်ရောက်နေတုန်းမို့ 
Aung Thu Htet on September 6, 2013 at 2:55 pm said:
ပြင်ဦးလွင်မှာ သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်းရှိမရှိတော့ မပြောတတ်ဘူးဗျ။
မန္တလေးမှာဆိုရင်တော့ အောက်က လိပ်စာမှာ သင်နိုင်ပါတယ်။
U Maung Maung (Thaing Byaung Byan)
aungaung on September 7, 2013 at 12:39 pm said:
အကိုရေသိုင်းသင် တန်းတွေကစုံစမ်းကြည့်တော့ဈေးက တော်တော်ကိုများတယ်ဗျမတတ်နိုင် ဘူးဗျဈေးနဲနျဲနဲ့သင်တဲ့ပုစွန်တောင် မှာကျတော့အချိန်ကမရဖြစ်နေတယ်
ကျေးဇူးပြုပြီးဈေးနည်းနည်းနဲ့သိုင်းသင် တန်းလေးညွှန်ပေးပါနော် ဝါသနာပါလွန်းပေမဲ့ပိုက်ဆံမတတ်နိုင် လို့ပါဗျာ
Aung Thu Htet on September 7, 2013 at 3:47 pm said:
မြန်မာနိုင်ငံသိုင်းအဖွဲ့ချုပ်မှာ သွားကစားပါ။ အဲ့ဒီမှာ ဈေးမကြီးဘူးဗျ။ စ၀င်တဲ့အချိန်မှာ ၀င်ကြေးတို့ ၀တ်စုံကြေးတို့ ပေးရပေမယ့် နောက်လတွေကျရင် လစဉ်ကြေးပဲပေးရတော့တာပါ။ လစဉ်ကြေးက ၅၀၀၀ လောက်ပဲပေးရတယ်လို့ကြားပါတယ်။ အသေးစိတ်ကို အပေါ်မှာပေးထားတဲ့ ဖုန်းနံပါတ်တွေကနေတစ်ဆင့် စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ။
Pingback: သိုင်းပြောင်းပြန် ပညာစဉ်၊ သမားစဉ် ဂါရဝပြု အခမ်းအနား | Thaing Wizard
Pingback: ကမ္ဘောဇ နန်းတွင်း ခူးခါချန့် သိုင်းပြောင်းပြန် အခြေခံ ကျင့်စဉ်များ | Thaing Wizard
Thu Rein on December 12, 2013 at 9:32 am said:
Aung Thu Htet on December 12, 2013 at 10:22 am said:
I.K.O Matsushima ၏ မြန်မာပြည်တာဝန်ခံ ကိုယ်စားလှယ်
IKO Myanmar Branch Chief ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့် ကိုယ်တိုင်ဦးစီးသင်ကြားသော
မာဆုရှိမား ကျိုခ့်ရှင်း ကရာတေး သင်တန်းကျောင်း
– သင်တန်းချိန်: Mon to Fri (7:30 ~ 9:30 am)
– အမှတ်(၆၀၁)၊ ပြည်လမ်း၊ ကမာရွတ်မြို့နယ်၊ ယုဒဿန်ရိပ်သာ၊
ကမ္ဘောဇဘဏ်ဘေး၊ မာလာမှတ်တိုင်၊ ရန်ကုန်။
– Ph: 0973036501
သူရိန်​ on February 3, 2014 at 4:08 pm said:
စ​နေ တနင်္ဂ​နွေ သင်​တဲ့ကရာ​တေးသင်​တန်း​ရောမရှိဘူးလားဗျ ရန်​ကုန်​မှာ​နော်​
saiaung on July 13, 2014 at 6:49 pm said:
IKO Myanmar Branch Chief ဆရာကြီး ဦးမောင်မောင်မြင့် သီးသန့် သူအိမ်မှာသင်တန်းရှိတယ် သွားမေးကြည့်လိုက်ပါ စနေတနင်္ဂနွေ သီသန့် သင်လို့ ရပါတယ်။
သင်တန်းချိန်ဖြစ်ဖြစ်ဖုန်းနဲ့ ဖြစ်ဖြစ်မေးကြည့် ပါကျနော်သူတပည့်ပါလွန့် ခဲ့တဲ ၁၀နှစ်လောက်ကသင်ဖူးတာပါ။နံချပ်ကူ၊စိုင်(ခရင်ခွ)အဲဒိုဓါးသိုင်းထိုက်ဂျစ်ဆု
ပညာဆုံတတ်တဲ့ ဆရာပါ ။ကိုယ်သင်ချင်တဲ့ ပညာကိုသင်နိုင်ပါတယ်။ကျနော်ကတော့
ကျူရှင်ကရာတေး ထိုက်ဂျစ်စု နံချပ်ကူ တွေသင်ခဲ့ ဖူးပါတယ်
သင်တန်းချိန်: Mon to Fri (7:30 ~ 9:30 am)
SOE SOE on January 8, 2014 at 9:36 am said:
အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျို့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ရော၊ အမျိုး၊ ဘာသာသာသနာကို ကာကွယ်ဖို့ရော
ပြည့်​စုံ on January 9, 2014 at 11:02 am said:
ကင်​ဒိုဓားသိုင်းနဲ့ အခြားဓားသိုင်း​တွေ တင်​​ပေးပါဦး ကျွန်​​တော်​ရှာတာမ​တွေ့လို့
tin mg win on March 1, 2014 at 5:48 pm said:
Aung Thu Htet on March 1, 2014 at 10:47 pm said:
ကျွန်တော်လည်း သေချာမသိဘူးဗျ။ မရှိဘူးလို့ ထင်တာပဲ။ ၀ူရှူးအဖွဲ့ချုပ်တို့ဘာတို့မှာ စုံစမ်းကြည့်ပါ။
Soe Thiha on May 16, 2014 at 1:31 pm said:
ဆရာကွန်ဖူးစိုးမြင့် ရဲ့ လိပ်စာနှင့် phone no လေးသိချင် လို့ ပါ ခင်ဗျာ။
Aung Thu Htet on January 19, 2015 at 2:45 pm said:
ဆရာကြီးက ဆင်မလိုက်၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမပေါ်မှာ အရိုးအကြောဆေးခန်းဖွင့်ထားပါတယ်။ သိုင်းသင်တန်းတော့ မဖွင့်တော့ပါဘူး။
kyawmintun on June 1, 2014 at 7:11 pm said:
အကိုေ၇……….အမှတ် ၁၉၉၊ဆူးလေဘု၇ားလမ်းက သိုင်းစာပေ ဘယ်ရွေ့ သွားလဲဟင်…………..
kyawmintun on June 1, 2014 at 7:12 pm said:
Aung Thu Htet on January 19, 2015 at 2:44 pm said:
thiha on June 1, 2014 at 7:14 pm said:
kyawmintun on June 1, 2014 at 7:17 pm said:
ဆ၇ာကွန်ဖူးစိုးမြင့် ၇ဲ့ လိပ်စာနဲ့ phနံပတ်သိချင်ပါတယ်
kyaw lay (bio) on August 18, 2014 at 7:05 pm said:
အခုလိုသိုင်းကျောင်းလိပ်စာတွေပြည်.ပြည်.၀၀တင်ပေးလို.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အကို………..ကျွန်တော်သိသမျှသိုင်းဖုန်းနံပတ်တွေလည်းတငပေးပါ.မယ်………….(၁)မြန်မာနိင်ငံကရာတေးအဖွဲ.ချုပ် ၃၇၉၉၃၉ (၂)မြန်မာနိင်ငံဂျူဒိုအဖွဲ.ချုပ် ၃၈၀၇၇၂ ။၃၇၄၉၄၁ (၃) မြန်မာနိင်ငံဝူ၇ှူးအဖွဲ.ချုပ် ၇၃၀၄၄၂၄၃ (၄)မြန်မာနိင်ငံ boxing အဖွဲ.ချုပ် ၈၅၅၀၀၈၀………….
အောင်ကို on April 28, 2015 at 1:49 am said:
Thae Nandar Zin on July 31, 2015 at 12:45 pm said:
Aung Thu Htet on August 3, 2015 at 9:48 am said:
များသောအားဖြင့် မိန်းကလေး၊ ယောက်ျားလေး ခွဲထားတာ မရှိပါဘူး။ အားလုံးသင်လို့ရပါတယ်။
Thuhtoosan on December 1, 2016 at 8:25 am said:
kyaw lin on November 29, 2015 at 11:54 am said:
အကိုရေ ပုသိမ်မှာ သိုင်းပြောင်းပြန်သင်တန်း ရှိသလို
ဟင်္သာတ မှာရော ရှိလားခင်ဗျာ
LeaveaReply to kyawmintun Cancel reply